စတော့ရှယ်ယာများနှင့်အနာဂတ်ကျော် FX ကောင်းကျိုးများ - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာForex ကျောင်းစာအုပ်စတော့ရှယ်ယာများနှင့် Futures ကျော် FX ကောင်းကျိုးများ
& Liquid ကမ်ဘာပျေါတှငျအကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးအရည်စျေးကွက် စတော့ရှယ်ယာရဲ့နေ့စဉ်အသံအတိုးအကျယ်အပေါ်မူတည် liquidity ကုန်သွယ်စာချုပ်များ၏တစ်လအပေါ်မှီခို liquidity
execution မြန်နှုန်း အနိမ့် slippage & အလို့ငှာအမှားများ ဒီထက်ငွေဖြစ်လွယ်, slippage နှင့်အမှားပိုတဲ့အခန်း ဒီထက်ငွေဖြစ်လွယ်, slippage နှင့်အမှားပိုတဲ့အခန်း
စစ်ဆင်ရေး၏ hours 24 နေ့ရက်ကာလအဘို့ 5.5 နာရီကုန်သွယ်အရေးယူတစ်ပါတ် တစ်နေ့လျှင်7နာရီကုန်သွယ်အချိန်ထက်လျော့နည်း တစ်နေ့လျှင်7နာရီကုန်သွယ်အချိန်ထက်လျော့နည်း
ကုန်ကျစရိတ်များ အနိမ့်ပြန့်နှံ့နှင့်မျှမတို့ကော်မရှင်ကအများကြီးအားလုံးအပေါ်နိုင်ပါတယ် (အီလက်ထရွန်နစ်များအတွက်) $3ကနေ $ 10-30 (အားလုံးအခြားသူတွေ) မှ (အီလက်ထရွန်နစ်များအတွက်) $5ကနေ $ 15- $ 50 (အားလုံးအခြားသူတွေ) မှ
Long က / က Short
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် နှစ်ဦးစလုံးနွားတကောင်စီနှင့်ဝက်ဝံစျေးကွက်များတွင်အဘယ်အကျိုးကိုရနိုင်သလား လူအများစုဟာအစားတိုတို-ရောင်း၏စတော့ရှယ်ယာဝယ်ခြင်း bearish ကာလတိုးချဲ့ကြလေ့
ကန့်သတ် အချိန်မရွေးကာလတိုရောင်းချနိုင်သလား အချို့သောကုန်သည်များ & ထိတ်အပေါ်ကန့်သတ် ကန့်သတ်ထ / ချစည်းမျဉ်းအားဖြင့်ကန့်သတ်ထရေးဒင်း
သြဇာ အမေရိကန်, 50 ခုနှစ်တွင်: 1; တခြားနေရာ 50 ထံမှ: 1: 1000 1 သကဲ့သို့မြင့်မားရန်2မှတက်: 1 သြဇာ 30 မှတက်: 1 သြဇာ
လိုအပ်ချက်များ ယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်တဲ့မိပွင့်လင်း & margin: mini ကိုအကောင့် $ အသေးစားများအတွက် 50 နှင့် $ 500 ငွေသားအကောင့်> $ 500 လိုအပ်ပါတယ်; အနားသတ်အကောင့်> $ 2000 > $ 4000 ကိုဖွင့်
ရာထူးအရွယ်အစားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အနေအထား sizing: 0.01 ($ 10 / PIP) မှ 0.1 မှ 1 (1 ဆင့် / PIP) ($ 10 / PIP) တရားရှိဖို့အနေအထား sizing: စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးအားမြှောက် 100 + ရှယ်ယာ, တရားရှိဖို့အနေအထား sizing: Over-သြဇာကုန်သွယ်အလားအလာ fixed & 1 စာချုပ် =
ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစား & Liquid အားသာချက်
အဆိုပါ Forex ဈေးကွက် ငွေဖြစ်လွယ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အခြားစျေးကွက်အပေါ်တစ်ဦးလွှမ်းမိုးသောအားသာချက်ရှိပါတယ်: ထရီလီယံ4ကျော်ဒေါ်လာခန့်မှန်းခြေနေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့်အတူပြုလုပ်ပေါင်းစပ်အားလုံးစတော့ရှယ်ယာ-ဖလှယ်မှုထက်ပိုကြီးတဲ့ 100 ကြိမ်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားတဲ့ငွေဖြစ်လွယ်ခြင်းဖြင့်အပ်နှင်းသုံးခုကိုအဓိကအားသာချက်များရှိပါသည်:
စျေးနှုန်းသည်ဧကန်အမှန်ဖြစ်အနည်းငယ်သာ slippage နှင့်အတူရယူလျက်ရှိ၏
အဘယ်သူမျှမ entity ဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်ရန်သို့မဟုတ်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
သောကြောင့်ယင်း၏ကြီးမားသောငွေဖြစ်လွယ်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်-based ပလက်ဖောင်း (အဘယ်သူမျှမဖလှယ်မှုမရှိ Open-အော်ဟစ်တွင်းမရှိကြမ်းပြင်ပွဲစားများ) ၏မြန်ဆန်စေရန်အတွက်ကွပ်မျက်နှင့် instant ဝစွာအတည်ပြုချက်ကိုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်ကြသည်။ သင်သတင်းကြေငြာစဉ်ကကုန်သွယ်မှုလျှင်သို့မဟုတ်သင်မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်ကုန်သွယ်မှုလျှင်အချို့သော slippage ကိုစုပ်ယူရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ပေါ်မှာရှိသမျှစျေးနှုန်းများ execute နိုင်ပါတယ် ပှဲစား သူတို့ပြသနေကြသည်အဖြစ်ပလက်ဖောင်း။ အများစုကပွဲစားများကို real-time ကိုးကားထံမှချက်ချင်းကုန်သွယ်မှုကွပ်မျက်သည်။ ပိုမိုလူကြိုက်များထိတ်နှင့်အနာဂတ်အချို့သည်ကိုအလွန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကွပ်မျက်မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ပေးသော, အီလက်ထရောနစ်ပလက်ဖောင်းများနှင့်ကူးလူးဖလှယ်မှုမှပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ကုန်သွယ်နေ့နှင့် slippage တစ်လျှောက်လုံးနေဆဲငွေဖြစ်လွယ်၏အံ့သြဖွယ်အတက်အကျမှအားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြည့်ဘုံဖြစ်ကြသည်။
စတော့ရှယ်ယာနှင့်အနာဂတ်အတွက်, ပိုကြီးတဲ့သင်တန်းသားများအတွက်နင်းသို့မဟုတ်ကွာနင်း, စျေးကွက်နှုန်းကိုမြင့်တက်သို့မဟုတ် crash စေ၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဝေးစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကနေနင်းကြီးမားသောပါဝင်သူတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကဥပမာကြာသပတေးနေ့, မေလ 6, 2010 ၏ "flash ကိုလေယာဉ်ပျက်ကျမှု" ကြီးရှိရာမြင့်ကြိမ်နှုန်း (HF) ကုန်သည်များကွာတိုးမြှင်နှင့်ငွေဖြစ်လွယ်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အဆိုပါလေယာဉ်ပျက်ကျမှုဟာအတူမိနစ်အနည်းငယ်ကြာ Dow Jones 1000 အချက်များပြုတ်ကျ (အတွင်းအကြီးမားဆုံးတစ်ရက်အမှတ်ကျဆင်း DJ နေ့လည်နောက်မှပြန်လမ်းညွှန်မတိုင်မီသမိုင်း) ။ အန္တရာယ်အထက်သို့က manipulate ဖို့အနာဂတ်ဈေးကွက်အတွက်နင်းကြီးမားသောပါဝင်သူတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကဥပမာ 2008 "အစာပူဖောင်း" ဖြစ်ခဲ့သည်: (မှန်းဆပိုက်ဆံပြုစုပျိုးထောင်နှင့်ပြုကြရန်တွန်းအားပေးဘို့နှင့်၎င်း၏ကုန်စည်ဒိုင်ညွှန်းကိန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှု) Goldman Sachs ရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူဂျုံ၏အမှန်တကယ်ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအားလွှမ်း အသစ်ကဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ၏, Goldman, အနည်းငယ်အောင်မကြုံစဖူးအဆင့်ဆင့်မှစပါးစျေးနှုန်းနှင့်အခြားအစားအစာကုန်စည် 2008% ကားမောင်းပေးသောထောက်ပံ့ရေးများများရှိစဉ်အခါတစ်ဦးကို virtual "ဝယ်လိုအားထိတ်လန့်" (80 ဂျုံများအတွက်ဘမ်စပါးရိတ်ရာကာလကြီး), ကို ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲသားများအတွက် Hyper-စျေးကြီးဖန်ဆင်းခံအစားအစာ၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်တန်ဖိုးများထက်ပိုသုံးဆယ်နိုင်ငံများရှိအစားအသောက်အဓိကရုဏ်းတစ်စင်းအားနှင့်တစ်ခုတည်းနှစ်တွင် 250 သန်းနေဖြင့်ငတ်မွတ်၏ရာထူးတိုးမြှင့် (၏ကုန်ကျစရိတ်မှာပြီးသားချမ်းသာကြွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများပိုမိုချမ်းသာအစားအစာပူဖောင်း).
သောကြောင့် Forex ၏ကြီးမားသောငွေဖြစ်လွယ်၏, အဲဒီမှာတက်သို့မဟုတ်ဆင်းဖြစ်စေစျေးကွက်ရွှေ့ဖို့ဒေါ်လာအရွယ်အစားရှိပြီးမ entity ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်စျေးနှုန်းခြယ်လှယ်မဟုတ်ဘဲ Non-တည်ရှိသည်။ သို့သော်ပေါင်းစပ်လုပ်ရပ်များ, သောထိုကဲ့သို့သောဗဟိုဘဏ်အဖြစ်အဓိကပါဝင်သူများ, အများအပြားပေါ်ပေါက်တယောဦးတည်ချက်အတွက်စျေးကွက်အတင်း, ဒါပေမယ့်ဒီစည်းမျဉ်းတစ်ခုချွင်းချက်ဖြစ်ပါသည်လိမ့်မည်။ စတော့ရှယ်ယာလောကီသားတို့သည်အများတွင်ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်သရုပ်ဆောင်ကြီးမားသောသင်တန်းသားများကိုတက်ကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မျက်နှာသာအတွက်ဈေးကွက်ကိုဆင်းနှင့်သင်တန်းသားများကိုအချို့သောထိတ် manipulate မှတရားမဝင်သို့မဟုတ် Amore ပြုမူနိုင်တဲ့အခါအခြားအကြိမ်ရှိပါတယ်နိုငျသောအခါအကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်: ဖွဲ့စည်းရေကန်, အရောင်းအ churning, ကောလာဟလအတွက်စျေးကွက်လုပ်မယ်လို့အရောင်းအလျှော်နဲ့ဝက်ဝံစီးနင်းမှုဖွဲ့စည်း, ပြေး။
Forex အတွက်, 24 ထံမှအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ဆိုလိုသည်မှာနာရီဝန်းကျင်တွင်တနင်္ဂနွေ မှလွဲ. 20 နာရီတစ်ရက်ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ: 15 ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် 22: တနင်္ဂနွေ 00 သည်အထိ ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် သောကြာနေ့။ ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစျေးကွက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်နီးကပ်သောကွောငျ့ဤအ 24 နာရီကုန်သွယ်ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပါသည်:
တိုကျိုပွင့်လင်း 7: 00 pm တွင် 0: 00
တိုကျိုပိတ် 4: 00 AM 9: 00
လန်ဒန်ပွင့်လင်း 3: 00 AM 8: 00
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကိုပိတ်ရန် 12: 00 pm တွင် 17: 00
နယူးယောက်ကိုဖွင့် 8: 00 AM 13: 00
နယူးယောက်ကိုပိတ်ရန် 5: 00 pm တွင် 22: 00
အာရှအမေရိကန်နှင့်ဥရောပ session တစ်ခုနာရီအတွင်းကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်အချိန်ဇယားကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့်နေ့ညဉ့်တစ်ဦးအနည်းငယ်သို့မဟုတ်တွေအများကြီး, ကုန်သွယ်ရေးအလုပ်မလုပ်, သင်သို့မဟုတ်သင့်အဘို့ပိုပြီးအဆင်ပြေသောအချိန်ကောက်လို့ရပါတယ် ဗျူဟာ.
ယေဘုယျအားဖြင့်များသောအားဖြင့်တည်ရှိသောသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဖလှယ်မှုများ၏အလုပ်ချိန်အတွင်းမှာထိတ်နှင့်အနာဂတ်စျေးကွက်ထိုနေ့၏တိကျသောနာရီမှာ tradable ဖြစ်ကြသည်စကားပြော NYC (9-5 EST) သို့မဟုတ်ချီကာဂို (8-4 CST),7နာရီထက်လျော့နည်းတည်တံ့တစျဦးစီ။ ဤအလုပ်ချိန်ပြင်ပမှာ, ကြိုတင်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းစျေးကွက်နာရီကြာဟုခေါ်တွင်သည်တယောက်တည်းနေဆဲအချို့အီလက်ထရောနစ်ဖလှယ်မှုအတွက်ကုန်သွယ်မှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ငွေဖြစ်လွယ်သိသိသာသာကြောင့်တိုးချဲ့ slippage မှကုန်သွယ်ခွင့်အလမ်းများကိုပိုပြီးအန္တရာယ်များအောင်, ပယ် tapered သိရသည်။ အသံအတိုးအကျယ်နာရီအလုပ်လုပ်သည့်ဖလှယ်မှုစဉ်အတွင်းအနည်းငယ် သာ. ကောင်း၏သောကြောင့်, ဒါကြောင့်အများအား (Futures များအတွက်) နယူးယောက် (အမေရိကန်စတော့ရှယ်ယာများအတွက်) သို့မဟုတ်ချီကာဂိုများ၏အလုပ်ချိန်အတွင်းမှာကုန်သွယ်မှုရန်အကြံပြုထားသည်။ အထူးသဖြင့်နေ့ချင်းညချင်းသတင်းကြေငြာနေစဉ်အနီးကပ်နှင့်ပွင့်လင်းကြားကစျေးနှုန်းများ၌ဤသတ်မှ Added ကုန်သည်များဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စျေးကွက်၏မကြာခဏပိတ်ပွဲနှင့်အဖွင့်၏ဖြစ်ပေါ်စျေးနှုန်းကွာဟချက်၏ပြဿနာနှင့်နောက်ဆက်တွဲခြားနားချက် (သို့မဟုတ်ကွာဟမှု) နဲ့ကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်: ဥပမာအားဖြင့်, ရှယ်ယာများ၏စျေးနှုန်းတနင်္လာနေ့ $ 35 တစ်ဦးအနိမ့်ရောက်ရှိနှင့်အင်္ဂါနေ့က $ 30 မှာဖွင့်လှစ်သည်မှန်လျှင်, တစ်ဦး $5အောက်ဖက်စျေးနှုန်းနေ့ချင်းညချင်းသူတို့ရဲ့ရာထူးကျင်းပသူတိုတောင်းသောကုန်သည်များအဘို့ကောင်းသောကွာဟမှု, ဒါပေမယ့်တာရှည်ကုန်သည်များများအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။ အားလုံးညွှန်းကိန်းများနှင့်လှိုသည်ဤကွာဟချက်အပေါ် skewed ဖြစ်လာသောကြောင့်, စျေးနှုန်းတွင်ဤကွာဟချက်ကိုလည်းတဦးတည်းရဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြံစည်များအတွက်ပြဿနာရှိနိုင်ပါသည်။
Long က / က Short ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: Bull ပြီးတော့ထမ်းရွက်စျေးကွက်နှစ်ဦးစလုံးထံမှအမြတ်အစွန်းရနိုင်
တချို့ကကုန်သည်များ, အထူးသဖြင့်တဲ့သူတွေမှသာကုန်သွယ်မှုစတော့ရှယ်ယာတစ်ဦးကစျေးကွက်တက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကသာငွေရှာနိုင်မထင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Forex ဈေးကွက်ထဲမှာသင်စျေးကွက်ဖွင့်သို့မဟုတ်ကျသွားတဲ့အခါမှာငွေရှာဖို့အခွင့်အလမ်းများရှိသည်။ သငျသညျစျေးကွက်ပိုမိုမြင့်မားသွားရမယ့်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသင်သည်တာရှည်သွားပါ (ဝယ်ဖို့) နှင့်သင်ဈေးကွက်ကိုဆင်းသွားစဉ်းစားသောအခါ, သငျသညျအတို go (ရောင်း) ။ အချို့သောအမြဲဖွင့်သွားကြဖို့စျေးကွက်မျက်နှာသာကြောင်းကုန်သည်များနှင့်အမြဲဈေးကွက်ကိုဆင်းသွားကြဖို့မျှော်လင့်ထားသူကိုကတခြားကုန်သည်များရှိခဲ့သည်။ ကြောင်းစျေးကွက်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဒါဟာပိုပြီးအခွင့်အလမ်းများရရှိသောစျေးကွက်ဖြစ်စေလမ်းကုန်သွယ်မှုနိုင်စေဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလုပ်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးငွေကိုတူညီသောလမ်းကိုရေတွက်သည်။ ဒါဟာသင်သည်အဘယ်သို့ paid နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်တို့အဘို့ငွေကြေးရောင်းလိုက်သောအကြားကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပထမဦးဆုံးရောင်းအကြာတွင်ဝယ်ဖို့, သို့မဟုတ်ပါကအခြားလမ်းလုပ်ပေးပဲဖြစ်ဖြစ်, အရေးမထားဘူး။
ကုန်သွယ်နိုင်မြောက်မြားစွာငွေကြေးရှိပါတယ်ကတည်းကအချို့သောမတည်ငြိမ်သောရွေ့လျားနီးပါးအမြဲရှိပါတယ်။ သတင်းကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းမကောင်းဖြစ်ပြီး, သူတို့ကိုနှစ်ဦးစလုံးကုန်သွယ်မှုနိုင်ပါလိမ့်မည်ဆိုပါကဒါဟာအရေးမထားဘူး။ ရေကြီးမှု, အစာခေါင်းပါးသောအခါ, မိုးခေါင်ခြင်း, စစ်ပွဲတွေ, နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအဖြစ်စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှု, ဒါမှမဟုတ်မရှိခြင်း, အတိုးနှုန်း, ငွေဖောင်းပွမှုနှင့်ငွေကြေးကျုံ့အားလုံးနှစ်ခုကိုငွေကြေးများ၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးကိုတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ငွေကြေးအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါမယ့်အဘယ်အရာကိုအမြင်ကွဲပြားမှုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်, သို့သော်အမြဲအခြို့သောမတည်ငြိမ်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာခြံကိုခေါ်တစ်ချိန်တည်းမှာရှည်လျားပြီးရေတိုအတူတူပင်ငွေကြေးရောင်းဝယ်ဖောက်ရန်, ငွေကြေးနှင့်အတူ, ထိုသို့ခွင့်ပြုသောသူအချို့ပွဲစားများနှင့်အတူလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ Hedging စွမ်းရည်, အခြားထက်ကွဲပြားတစ်ဦးထက်ပိုသောအားသာချက်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိနိုင်ပါသည်။ တဦးတည်းသိသာအားသာချက်ကဖောက်သည်တစ်ဦးကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချဖို့ကုန်သွယ်မှုကိုထေမိရန်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သင်ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်အတွက်အခြားနှင့်အတူကထေမိခြင်းရှိမရှိ, ထိုအမြတ်အစွန်းနှင့်အရှုံးနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်, သင်နှစ်ခုအရောင်းအကိုဖန်ဆင်းသောကွောငျ့သငျသညျနှစ်ကြိမ်အဖြစ်တာန်ပေးဆောင်ကြောင်းဆင်ခြင်သောအခါသို့သော်ဤနည်းသည်တစ်ဦးအားသာချက်ဖြစ်လာသည်။ hedging ၏တစ်ဦးထက်ပိုသောစိတ်ဝင်စားဖို့အားသာချက်ကိုသင်တူညီသောအကောင့်ထဲမှာ, တူညီတဲ့ငွေကြေးပေါ်တွင်ကြောင့်အဆသင့်ရဲ့တဦးတည်းမှာမျိုးစုံမဟာဗျူဟာ play နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ဗျူဟာ ဒုတိယတစ်ဦးတိုတောင်းစတင်သောအခါအရှည်လျား, သင်သည်သင်၏ရှည်လျားပိတ်ဖို့ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရဖို့မလိုလားကြပါဘူးစေခြင်းငှါ ဗျူဟာ ကသေး၎င်း၏ခဲ့ကြောင်းပြီးစီးခဲ့မမူ, မသင်သည်၎င်း၏ရာထူးသို့ဝမှဒုတိယကန့်သတ်ချင်ကြဘူးသောအခါရာထူး။ သငျသညျဆန့်ကျင်ခြံဥပဒေတွေထဲကနေပြင်ပမှာဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများပေါ်တွင်သူတို့ Setup ဝင်. မှထွက်ရန်နှစ်ဦးစလုံးရှည်နှင့်အတိုရာထူးခွင့်ပြုချင်တယ်။ ဒါ့အပြင်အချို့မဟာဗျူဟာများသို့မဟုတ်ကွက် hedge သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်း၏အရေးပါသောအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်အဖြစ် hedge, ဒါကြောင့်တစ်ဦးမှစွမ်းရည်အပေါ်မူတည် ကုန်သည် ထိုကဲ့သို့သောကွက်နှင့်အတူလုပ်ကိုင်ဖို့လိုမယ့်အထဲကရှာသငျ့ ပှဲစား စွမ်းရည် hedging အတူ။
Forex အတွက်အဲဒါကိုရှည်တဦးတည်းယူဖြစ်သကဲ့သို့အတိုအနေအထားကိုယူသကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။ ငွေကြေး, အားလုံးအတွက်ကုန်သွယ်နေကြတစ်ခုချင်းစီငွေကြေးကိုအခြား၏စည်းကမ်းချက်များ၌စျေးနှုန်းခံရကတည်းကတစ်ဦးငွေကြေးကို pair တစုံအပေါ်ရေတိုအရောင်းရဆုံးထိတာရှည်မယ့်ရန်တူညီသည်။
သို့သော်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာအတိုရောင်းချနေအပေါ်ချမှတ်ထားကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်မှာတော့အတိုရောင်းသူဟာအဘို့အအပြစ်တင်ခဲ့ကြသည် က Wall Street Crash 1929 နှင့်ချက်ချင်းရှေ့ကုန်သွယ်မှုညီမျှသို့မဟုတ်ရေတိုရောင်းချမှု၏စျေးနှုန်းထက်နိမ့်ခဲ့မဟုတ်လျှင်ဒီတော့အစိုးရစည်းမျဉ်းများတစ်စတော့ရှယ်ယာ shorting ကနေကုန်သည်များကကာကွယ်တားဆီးသော uptick စိုးမိုးရေး (အဖြစ်လူသိများခဲ့သည့်တစ်ဦး downtick, စဉ်အတွင်းရှယ်ယာရောင်းချရာမှတိုတောင်းရောင်းသူပိတ်ပင်ရန်ချမှတ်ခဲ့ကြသည် ) ။ အဲဒီစည်းမျဉ်းကဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည့်အခါဇူလိုင်လ 1938,3မှီတိုင်အောင် 2007 မှအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ SEC (SEC အမှတ် 34-55970) ကိုလွှတ်။ မကြာသေးမီကစက်တင်ဘာ 2008 အတွက်တိုတောင်းအရောင်းရဆုံးစျေးကွက်ပြိုလဲဖို့အထောက်အကူပြုအချက်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်, ထိုသို့အားဖြင့်ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည် SEC သူတို့အားကုမ္ပဏီများမှတည်ငြိမ်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတွင်သုံးပတ်ကြာ 799 ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီများအတွက်။ တောင်မှအစိုးရစည်းမျဉ်းကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အားလုံးမဟုတ်ထိတ်ပု, shorted ခံရဖို့ရရှိနိုင်ပါသည် ပှဲစား သူမြားကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တောင်, ထို့နောက်အားလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကသူတို့ထံမှချေးဖို့အနားသတ်အရည်အချင်းပြည့်မီရှိသည်မဟုတ်သည့်သင်အကြောင်းကြားဖို့ရှိပါတယ် ပှဲစား တိုတောင်းတဲ့စတော့ရှယ်ယာရန်။
စတော့ရှယ်ယာမှာ, တိုတောင်းရောင်းချနေတာရှည်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ထက်ပိုစွန့်စားမှုသယ်ဆောင်သတိပြုပါရန်လည်းအရေးကြီးပါသည်။ ရှည်လျားသွားမှာတော့ဆုံးရှုံးမှု (စျေးနှုန်းသာသုညအရပ်သို့ဆင်းသွားနိုင်သည်) ကန့်သတ်ထားပေမယ့်အကျိုးအမြတ်န့်အသတ်ဖြစ်ကြ၏; တိုတောင်းသော-အရောင်းရဆုံး၌ဤပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်, ဖြစ်နိုင်သမျှအကျိုးအမြတ် (စတော့ရှယ်ယာသာသုည၏စျေးနှုန်းအရပ်သို့ဆင်းသွားနိုင်သည်) ကန့်သတ်နေကြတယ်, နှင့်မျှမတို့အထက်န့်သတ်ချက်ရှိသည်ရောင်းသူ, ရှယ်ယာ၏မူလတန်ဖိုးကိုထက်ပိုမိုဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ က Short ရောင်းသူလည်းတိုတောင်းတဲ့ညှစ်များအတွက်အလားအလာသတိထားဖြစ်ရမည်။
Forex အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သောအခါ, ကုန်ကျစရိတ်အနည်းငယ်မျှသာရှိပါသည်။ အများစုကပွဲစားများကော်မရှင်အားသွင်းပေမယ့်အစား, အလေလံအကြား ( "ပြန့်ပွား" ဟုခေါ်) ကို width ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် 2-5 pips ကနေအထိအဓိကငွေကြေးအားလုံးအတွက်အတော်လေးအသေးဖြစ်နိုင်ပါသည်သောစျေးနှုန်းများမမေးကြဘူး။ သူတို့တစ်ဦးနှင့်ဝသကဲ့သို့, ကော်မရှင်အားသွင်းလုပ်ပေးသောအခါ, ECN ပွဲစားက, ကုန်သည် မကြာခဏကြောင့်များစွာလျော့ချပြန့်ပွားတစ်ခုခြုံငုံနိမ့်ငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။
စတော့ရှယ်ယာနှင့်အနာဂတ်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်, တိုင်းကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ကော်မရှင်အားသွင်းနှင့်မကြာခဏကုန်သွယ်အတော်လေးစျေးကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ လျှော့စျေးအွန်လိုင်းပွဲစားများ (ဥပမာ, အစား $4၏စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ်မှုနှုန်း $ 20 သကဲ့သို့အနိမ့် charging) ယှဉ်ပြိုင်ပုံမှန်အုတ်နှင့်အင်္ဂတေပွဲစားများမှဆွေမျိုးသိသိသာသာနည်းလမ်းကော်မရှင်လျှော့ချရန်နှောင်းပိုင်းတွင်၏ဝင်ခဲ့ကြပေမယ့်ပင်ကိုသူတို့အများကြီးနိမ့်ကော်မရှင်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မနိုင် Forex ပွဲစားများ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုပြန့်ပွား / ကော်မရှင်စျေးနှုန်း။
Forex ၏ငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်ကိုအသုံးပြုစာရေးတံအရွယ်အစား rata လိုလားသူကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာအလုံအလောက်, ကလည်းပိုပြီးတရားမျှတပြီးတသမတ်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်၏ 1 မိုက်ခရိုတွေအများကြီးကုန်သွယ်မယ်ဆိုရင် GBPUSD4pips တစ်ပြန့်ပွားနှင့်အတူသင်၏ငွေသွင်းငွေထုတ်ကုန်ကျစရိတ်သာ 40 ဆင့် (4 pips X ကို 0.10 ဆင့်) ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပဲ။ ပင်အသေးဆုံးအရွယ်အစားငွေပေးငွေယူမှာထိတ်သို့မဟုတ်အနာဂတ်မဆိုငွေပေးငွေယူ, နိမ့်ဆုံး 100 ကြိမ်ကြောင်းငွေပမာဏ (မိ $ 4) မှာဖြစ်ဖို့ရှိသည်မယ်လို့, ပြီးတော့သင်သာနက်ရှိုင်းတဲ့လျှော့စျေးအွန်လိုင်းအရစ်ကျမှာ "တရားမျှတသော" ကုန်ကျစရိတ် get လိမ့်မယ်။
Forex ၏တစ်ဦးကကြီးမားအားသာချက်ကိုသင်ကုန်သွယ်စတင်ရန်ငွေအရင်းအနှီးကြီးမားငွေပမာဏကိုမလိုအပ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ အများစုကပွဲစားများကိုသင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အများအပြားအဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ် $ 500 ဘို့ခွင့်ပြုသဖြင့်, $ 50.00 အမေရိကန်ဒေါ်လာထက်လျော့နည်းနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့် Forex သေးငယ်တဲ့အရင်းအနှီးများအတွက်ကောင်းစွာသင့်တော်ပါတယ် ကုန်သည်.
တဦးတည်းထိတ်သို့မဟုတ်အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှုရန်လိုအပ်ပါသည်က virtual ဆောင်ခဲ့ဤအနိမ့်အရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ သူတို့ကသငျသညျ $ 2000 သကဲ့သို့အနိမ့်နှင့်အတူအကောင့်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုပေမယ့်သောကြောင့်ပုံသေအနေအထား sizing နှင့်တရားရှိဖို့သြဇာရွေးချယ်မှု, သင်သည်ဤနိမ့်ဆုံးအကောင့်အရွယ်အစားနဲ့အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်ကုန်သွယ်အပေါ်တာခံရလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်မြင်ရကြလတံ့အဖြစ်က သာ. ကြီးမြတ်ထက်ထိတ်နှင့်အတူ $ 10,000 သို့မဟုတ်အနာဂတ်နှင့်အတူ $ 100,000 နှင့်အတူကုန်သွယ်မှုပိုမိုလုံခြုံပါလိမ့်မယ်။
အများဆုံးပွဲစားများသာသင် 100 ရှယ်ယာလုပ်ကွက်ဝယ်ယူခွင့်ပြုကြောင့်ထိတ်ဈေးကွက်ထဲမှာ, သင်သည်လုံခြုံစွာ $ 25 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမှာစျေးနှုန်းဖြစ်ကြောင်းစတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့ကြီးမားတဲ့ကနဦးအကောင့်အရွယ်အစားလိုအပ်လိမ့်မယ်။ အများဆုံးပွဲစားတဦးတည်း 100 ရှယ်ယာလုပ်ကွက်ဝယ်ယူရန်သာခွင့်ပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ကရှယ်ယာနှုန်း $ 100 များအတွက် Credit: ABC Company ၏ 50 ရှယ်ယာကိုဝယ်လျှင်ဥပမာ,, သငျသညျထိုကုမ္ပဏီကုန်သွယ်မှု $ 5000 ($ 50X100) လိုအပ်ပေသည်။ 1 at: (ငွေချေးမပါဘဲ) 1 သြဇာ, 10 ဒေါ်လာအားဖြင့်စတော့ရှယ်ယာရဲ့စျေးနှုန်းမဆိုတစ်စက် ($ 20X10 = $ 100) သင့်အနေအထား၏ 1000% ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုကိုယ်စားပြုပေသည်။ သငျသညျ2မှာအနားသတ်အပေါ်ချေးလျှင်: 1 သြဇာ, စတော့ရှယ်ယာဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် $ 2500 တက်ချပြီး, ထို့နောက်တော့ရှယ်ယာ $ 10 မှ $ 50 ထံမှ 40 ဒေါ်လာကျလျှင်, သင်ကနဦးကသင်၏ $ 1000 (၏ $ 2500 ဆုံးရှုံးမယ်လို့ သော 40% အရှုံးကိုယ်စားပြုမည်ဟု) နှင့်စျေးနှုန်းတစ်ဦးထပ်မံတစ်စက်ကသင်၏ထံမှအနားသတ်ခေါ်ဆိုခရတဲ့အန္တာရာယ်မယ်လို့ ပှဲစား အဆိုပါ 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုဟန်ချက် restore လုပ်ဖို့အကောင့်သို့ပိုပြီးအာမခံသို့မဟုတ်ငွေသားထားရန်။
ယင်းအနာဂတ်စျေးကွက်များတွင်သြဇာစတော့ရှယ်ယာထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားကြောင်း, အများကြီးသို့မဟုတ်စာချုပ်အရွယ်အစားကိုလည်း fixed ကြောင့်, ဒီ သာ. ကြီးမြတ်သြဇာအန္တရာယ်ခြီးမှမျးဤသို့လုံခြုံစွာကြောင့်ကုန်သွယ်မှုအများကြီးကြီးမားအကောင့်အရွယ်အစားလိုအပ်နေဆဲ။ ဥပမာအားဖြင့်, ($ 4000 အနားသတ်၏) တဦးတည်းအနာဂတ်ကိုရွှေစာချုပ် 100 Troy အောင်စကိုထိန်းချုပ်ထား; 1200 သြဇာ: ကိုရွှေ $ 120,000 / အောင်စမှာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျှင်, အရှင်, စာချုပ်များ၏တန်ဖိုးက 1200 စေသည်ထားတဲ့ $ 100 ($ 30 X ကို 1 အောင်စ) ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, 1 အချက် = $ 100 ။ စာချုပ်ကြောင့်ကြီးမားသောသြဇာနှင့်အမှတ်တန်ဖိုး fixed ကြောင့်, သင်ကအန္တရာယ်နှင့်တရားရှိဖို့သြဇာအတူ flyer နေကြသည်။ သငျသညျ 100 ရမှတ် (100 အချက်များ X ကို $ 100 = $ 10,000) ၏ရွှေအဖွင့်အပတ်စဉ် vacillation ကိုဆီးတားနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့အနားသတ်ထက်အဆများစွာပိုမိုကြီးမားအကောင့်တစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မယ်။ ကိုရွှေသင့်ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကိုဆန့်ကျင်သို့ပြောင်းရွှေ့လိုလျှင်, သင့် $ 10,000 စုံတွဲတစ်တွဲနေ့ရက်ကာလ၌အငွေ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။ တစ်အနာဂတ်ပါလျှင် ကုန်သည် ဒီထက်ငွေကြေးနှင့်အန္တရာယ်နှင့်အတူကုန်သွယ်မှုသည်, မိမိသာ option ကိုရွှေ mini ကိုစာချုပ်ကုန်သွယ်မှုလိမ့်မယ်လိုခငျြ (အစား 33.2 ၏ 100 အောင်စ; 1 အချက် = $ 33) တတိယအားဖြင့်သူ့သြဇာနှင့်အန္တရာယ်လျှော့ချမယ်လို့ထားတဲ့ e-CBOT လဲလှယ်မှာ သို့သျောသူ၏ရာထူးကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ 100 အမှတ်ပြောင်းရွှေ့သေးသာရှိပြီး $ 3000 ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုယ်စားပြုလိမ့်မယ်။ mini ကိုကိုရွှေကန်ထရိုက်များ၏အနာဂတ်ကုန်သည်များအရောင်းအဆုံးရှုံးတဲ့စီးရီးကိုဆီးတားနိုင်ပါလိမ့်ကူး $ 50,000 လိုအပ်လိမ့်မယ်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သြဇာနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တွေအများကြီးဆိုက်နှစ်ခုလုံးနှင့်အတူ Forex အများကြီးသေးငယ်တဲ့ကနဦးအရင်းအနှီးပမာဏနှင့်အတူဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးလုံခြုံစွာအသေးစားအများကြီးအရွယ်အစားနှင့်ကုန်သွယ်ခြင်းရှိလော့။ ဥပမာသင်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့သာ $ 1000 ခဲ့လျှင်, သငျသညျ 200 နဲ့မိုက်ခရိုအရစ်ကျအကောင့်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့: 1 သြဇာ, သင်အလားအလာသင့်ရဲ့မြို့တော် 200 ကြိမ်ကုန်သွယ်မှု, ဒါမှမဟုတ်2စံစာရေး (1 စံတွေအများကြီး = $ 100,000 နိုင်သော်လည်း;2အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်သုညသြဇာသုံးပြီးမည်ဖြစ်ကြောင်းထားတဲ့လုပ်ဖို့စမတ်အရာနိမ့်ဆုံးတွေအများကြီးအရွယ်အစားကုန်သွယ်မှုပါလိမ့်မယ်စံစာရေးတံ = $ 200,000), 1 မိုက်ခရိုတွေအများကြီး (0.01 = $ 1000) ။ ဟုတ်ပါတယ်, သုညသြဇာ။ ဒီအကြောင်းပြချက်ငွေကြေးယေဘုယျအား 100 pips သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို vacillate နှင့်တဦးတည်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာပြီးသားတွေအများကြီးဆိုက်ကနေတဆင့် PIP ၏တန်ဖိုးယုတ်လျော့ဘဲလျက်ဖြင့်သင့်အနေအထားဆန့်ကျင်နေတဲ့ 100 PIP ပြောင်းရွှေ့ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးစံအများကြီးသုံးပြီး 1 PIP $ 10 ညီမျှသောကြောင့်, ထို့နောက် 100 PIP ဆိုးရွားသောအပြောင်းအရွေ့ (သင်ထိုကဲ့သို့သောသြဇာ employ ရန်လုံလောက်သောစကားမပြောနိုင်သောဖြစ်လျှင်အားလုံးသင့်အကောင့်မှထွက်ရှင်းလင်း!) တစ်ဦး $ 1000 အရှုံးကိုယ်စားပြုလိမ့်မယ်။ သငျသညျ (ကမိုက်ခရိုတွေအများကြီးသုံးပြီး 0.01 PIP $ 1 ကုန်ကျ) တစ်ဦး 0.10 အများကြီးအရွယ်အစားကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သို့သော်, ထို့နောက်တစ်ဦး 100 PIP ဆိုးရွားသောအပြောင်းအရွေ့တစ်ခုသာ $ 10 ဆုံးရှုံးမှု (ယ့်ခြစ်ရာ, သင့်အကောင့်အသေးစား 1% အရှုံး) ကိုကိုယ်စားပြုပေသည်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့, သင်သည်သင်၏အကောင့်ရှိပြီးသားတက်လွပါပြီမယ်လို့ဘယ်မှာအနာဂတ်စျေးကွက်နှင့်မတူဘဲဆုံးရှုံးအရောင်းတစ်စီးရီးကိုဆီးတားခြင်းနှင့်နေဆဲဂိမ်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ 400 ၏အလားအလာသြဇာ: ငါတို့သည်သည်အခြားကဏ္ဍများအတွက်ဆွေးနွေးကြမည်အဖြစ် 1 ထို့နောက်ခြွင်းချက်အခွင့်အလမ်းသို့မဟုတ်အရေးပေါ်ကိစ္စများတွင်အရံအတွက်ထားနိုင်ပါတယ်။
Sum ခုနှစ်တွင် FX ကောင်းကျိုးများ
Forex သင်သည်အလွန်လုံခြုံနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စတင်ပမာဏအများကြီးအရွယ်အစားနှင့်သြဇာသုံးပြီးများ၏အလားအလာနှင့်အတူအနိမ့်န့်နှင့် / သို့မဟုတ်ကော်မရှင်များနှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိကျစွာ (ကလွန်စွာအရည်ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း), ရှည်လျားတိုတောင်းသောလမ်းညွန်အတွက်ကုန်သွယ်မှု 24 နာရီ execute ခွင့်ပြုပါတယ်။ ၏စည်းကမ်းချက်များ၌စတော့ရှယ်ယာနှင့်အနာဂတ်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အကုန်အကျဖြစ်နိုငျသညျ, ကွပ်မျက်နှောင့်နှေး, slippage နှင့်စျေးနှုန်းခြယ်လှယ်များ၏ ပို. ဖြစ်နိုင်ခြေအတူကုန်သွယ်နာရီနှင့်ဦးတည်ချက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဝေးသောပိုပြီးကန့်သတ်ကုန်သွယ်ပြတင်းပေါက်ရှိလျက်နှင့်ပိုပြီးအန္တရာယ်များ သူတို့ရဲ့ပုံသေစတင်ပမာဏအများကြီးအရွယ်အစားနှင့်သြဇာ။
long ကက Short
Long က / က Short ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: နှစ်ဦးစလုံးနွားတကောင်စီနှင့်ဝက်ဝံစျေးကွက်ကနေအကျိုးမပေးနိုင်နိုင်သလား
က Wall Street Crash